instrumental - Synonyms of instrumental | Antonyms of instrumental | Definition of instrumental | Example of instrumental | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for instrumental
Top 30 analogous words or synonyms for instrumental
Post-metal Pelican မှ Trevor de Brauw က “ကျွန်တော်က metal ကို စွဲလမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pelican ကို metal တီးဝိုင်းအဖြစ် မထင်မိပါဘူး။ ဒီတော့ လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို instrumental, post-metal, metalcore ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘာကြောင့်ပြောလဲ ကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆက်နွယ်မှုကို ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဂီတဟာ punk နှင့် hardcore များနှင့် ဆိုင်သလို ခံစားရပါတယ်။
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း During the late 1960s, von Braun was instrumental in the development of the U.S. Space & Rocket Center in Huntsville. The desk from which he guided America's entry in the Space Race remains on display there.
Nintendocore အခြား Nintendocore တီထွင်သူမှာ The Advantage ဖြစ်သည်။ The New York Times မဂ္ဂဇင်းမှ ထိုအုပ်စုကို video game ဂီတ mainstream modern ဂီတ spotlight အဖြစ် ယူဆောင်ခဲ့သည့် အုပ်စုများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ချီးမွန်းခဲ့သည်။ The Advantage သည် instrumental rock တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး Nevada Union High School မှ ကျောင်းသားနှစ်ဦး တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအုပ်စုသည် Nintendo console games မှ ဂီတကို တီးခတ်ခဲ့သည်။ video game sound track များကို rock cover versions ဖြင့်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ထိုဂီတပုံစံကို Nintendocore ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။